Ndekupi kwekutora mavhidhiyo emitambo yeLinux? | Linux Vakapindwa muropa
Ndekupi kwekutora mavhidhiyo emitambo yeLinux?
Isaac | 28/09/2021 19:44 | Linux Mitambo
La video game game industry Iyo ndeimwe yeanesimba uye mari-inofamba-famba pasirese, kunyangwe kupfuura mubatanidzwa wefirimu nemimhanzi indasitiri yabatanidzwa. Bhizinesi rakakura rine huwandu hwemazita emarudzi ese anosunungurwa gore rega rega kumapuratifomu akasiyana, kusanganisira GNU / Linux futi.
Mimwe mitambo yemavhidhiyo yakasununguka zvachose, mimwe ine mitengo isingadhuri. Kune rimwe divi, vamwe vane mitengo yakakwira, uye kana iwe uri inveterate gamer uye unowanzo tenga yakakwana kwavari pakupera kwegore, inogona kunge iri mari huru. Nekudaro, zvitoro zvakaita Kuzvininipisa, GOG, kana Steam kubva kuValve Ivo vane zvakanyanyisa muto zvaderedzwa. Dambudziko nderekuti ivo havawanzo kuwanikwa kana iwe ukaenda kunotenga iwo mutambo waunofarira zvakanyanya ...
Asi iwe unofanirwa kuziva dzimwe sarudzo dzekuti uwane mazita emitambo yako yevhidhiyo yaunofarira yeLinux uye yemamwe mapuratifomu zvakavimbika, zvakachengeteka uye nezvakanaka zvinodzikisira. Authentic bargains kuti unogona kuvhima kubva zvino zvichienda mberi. Ndiri kutaura nezvemapeji senge Instant Gaming.
Pa webhusaiti ye Pakarepo Kutamba iwe uchave unokwanisa kutsvaga mazhinji aripo emavhidhiyo mazita mazita ne kukanganisa izvo zvinogona kubva kubva ku5% kuenda kune zvimwe zvakaderedzwa zve, 20%, 30%, 50% uye kunyange zvimwe.
Kuti uwane tsvaga kana zita iri rauri kutsvaga ine kupihwa, iwe unofanirwa ku:
Pinda Mitambo Yekukurumidza munzvimbo yako yekutsvaga.
Pane iyo All Systems tab, sarudza Linux kusefa chete izvo zvepuratifomu (kana iyo yauri kutsvaga).
Iwe unogona zvakare kusefa nepuratifomu (Steam, Ubisoft, EPIC Mitambo, GOG,…), kunyangwe izvi zvichisarudzika. Kunyangwe nemhando yemutambo kana maitiro.
Imwe sarudzo ndeye kushandisa yako yekutsvaga injini kutsvaga iyo chaiyo zita.
Pakati pemhedzisiro, kana aripo, unogona sarudza kupihwa uye utenge. Ichokwadi ndechekuti, kune mamwe anoshamisika emabhawa kunze uko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Ndekupi kwekutora mavhidhiyo emitambo yeLinux?
Ini handizive kana iwe uchiziva kuti Instant Kubhejera, seG2A kana zvimwe zvakawanda zvakachipa zvitoro, zviri grey musika. Paunotenga muzvitoro izvi hauzive kwakatangira kiyi iyi. Muzviitiko zvakawanda izvi zvinotengeswazve Humble Bundle makiyi, makiyi kubva kune mamwe matunhu, kana zvakanyanya, makiyi akatengwa nemakadhi echikwereti akabiwa kana akaumbwa.
Haisi nguva yekutanga kuti mushandisi atenge kiyi mumusika uyu uye chakanzurwa papuratifomu yairi. Chiri chakaipisisa ndechekuti vanogadzira havaone kana kobiri rekutengesa uku, uye muzviitiko zvakawanda ivo vanoti ivo vanokusarudza iwe kuti utsvage mutambo uyu usati waita kuti zvitoro izvi zvive zvakapfuma nemari yavo.
Asi sezvandinowanzoreva, munhu wese akasununguka kuita zvavanoda nemari yake ... ndine hana yakachena
Chii chinonzi NFTs, Bubble, fashoni kana paradigm nyowani?
Fedora 35 Beta Yakaburitswa